URamaphosa uzuze ubuholi be-ANC KwaZulu-Natali | Scrolla Izindaba
URamaphosa uzuze ubuholi be-ANC KwaZulu-Natali
UMengameli uCyril Ramaphosa ubukeka ezuze izinhliziyo nokuthembeka kwezepolitiki kobuholi be-ANC KwaZulu-Natali.
Bobabili uNdunankulu uSihle Zikalala kanye noNobhala wesifundazwe uMnuz Mdumiseni Ntuli, njengamanje sebephoqelela umthetho we-ANC wokuthi abaholi ababekwe amacala ngamaphoyisa kumele bashenxe ngokushesha.
Lesi yisikhathi esibucayi lapho uRamaphosa ezodinga ukwesekwa yisifundazwe ukuze athole ihlandla lesibili njengomholi we-ANC.
Ngemuva kweminyaka eyishumi uJacob Zuma nabalingani bakhe bephethe izintambo zombuso esifundazweni, i-ANC eKZN yathatha isinqumo ezinzima yatshela abaholi beqembu ababhekene namacala ukuthi bashiye ngokuzithandela.
Lowo owayeyiMeya yeTheku, uZandile Gumede, njengamanje osengumsubathi omkhulu kwiSishayamthetho sesifundazwe, nalowo oyiphini likaSihlalo we-ANC esifundazweni uMike Mabuyakhulu, bangabanye babaholi abazomiswa ezikhundleni. Kuzwelonke, lo mthetho wokuthatha isinyathelo ungadala ukuthi u-Ace Magashule eshiye isikhundla sakhe sokuba ngunobhala-jikelele.
Umnqamulajuqu wezinsuku ezingama-30 onikezwe abaholi be-ANC abasebenza kuhulumeni noma eqenjini ukuba bashenxe uphela emasontweni amabili.
Okhulumela iqembu eKZN uNhlakanipho Ntombela, uthe akekho umuntu ongaphezulu kweqembu.
“I-NEC yisigungu esiphezulu esithatha izinqumo, futhi siyabuhlonipha ubuhlakani baso. Uma abantu bebeka izifiso zabo ngaphambi kweqembu, lokhu kungalimaza inhlangano yethu.”
UGumede ubhekene namacala ahlobene nethenda yezigidi ezingama-R400 yeThekwini Solid Waste. UMabuyakhulu ubhekene namacala aphathelene nomcimbi omkhulu we-jazz ongabanga yimpumelelo eminyakeni emihlanu eyedlule. UMagashule ungaphandle ngebheyili yezi-R200,000 mayelana nethenda ye-asbestos e-Free State engahamba kahle ngesikhathi enguNdunankulu wesifundazwe.
Ilungu le-NEC uNomvula Mokonyane uthe: “Bonke labo abathintekayo kulesi sinqumo sokuthatha izinyathelo kumele bahloniphe izinqubo ze-ANC bese beshenxa baze basulwe amacala ababekwe wona.”